Mini Mac vaovao misy M1X sy mpampitohy toa ny iMac araky ny Prosser | Avy amin'ny mac aho
Jon Prosser vao haingana no niezaka nanazava ny hoavin'ny Apple Watch amin'ny ho avy ary milaza amintsika fa ilay feo vaovao tsy misy fatiantoka ho tonga amin'ny AirPods amin'ny alàlan'ny fanavaozana. Noho izany rehetra izany dia tsy maintsy miandry isika, fa izao kosa dia manandrana maminavina izay ho toetran'ny Mac mini avy any Apple izy. Mampitandrina sahady fa ho milina feno rivotra izy satria hiaraka aminy chip vaovao M1X ary ny charger magnetika toa ny iMac ankehitriny sy vaovao.
Tao amin'ny lahatsariny farany, nilaza i Jon Prosser fa ny Mac mini manaraka miaraka amin'ny M1X dia hampiditra endrika endrika indostrialy vaovao ho an'ny Apple irery Apple. Ity maodely ity dia antenaina fa hisolo ny Intel Mac mini manana loko ambony ambony eo amin'ny laharana, miaraka amin'ny M1 Mac mini ho milina fidirana. Ny Mac mini 2021 dia hanasongadina a chassis ivelany vaovao miaraka amin'ny tampon'ny "Plexiglas" an-tampony.
Ny puce M1X hamela an'i Apple hanolotra seranan-tsambo feno indray, anisan'izany ny port USB4 / Thunderbolt 3 efatra, USB-A, Ethernet, ary HDMI hivoaka. Hampiasa ny endrik'ilay mpampitohy herinaratra magnetika toa an'i Apple izay natombony tamin'ny iMac M1. Prosser dia manombatombana fa ny famaranana toy ny fitaratra ambony dia mety hidika fa Apple dia mandefa safidy loko roa ho an'ity maodely ity. Amin'izany fomba izany dia hanana lafiny iraisana eo amin'ny solosaina misy ny marika paoma isika. Chip vaovao misy loko vaovao.
Un tatitra tamin'ny Bloomberg tamin'ny herinandro lasa teo nanolo-kevitra fa ny mini Mac vaovao dia hanasongadinana chip Apple Silicon ho avy miaraka amina fotony avo lenta miisa 8 sy fotona fahombiazan'ny 2. Izy io koa dia hanohana hatramin'ny 64GB RAM ary hasongadiny ny lalan'ny Thunderbolt izay manohana ireo seranan-tsambo IO nitarina. Ity puce ity dia antenaina hiseho amin'ny fanavaozana manaraka ny MacBook Pro 16-inch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » Mini Mac vaovao miaraka amin'ny M1X sy mpampitohy mitovy amin'ny iMac araka ny Prosser
Antenaina fa amin'ity iray ity dia hamaha ny olana izy ireo fa tsy mahomby ny efijery ivelany ary mila mamoaka ianao ary mametraka ny hdmi, satria amiko dia manomboka somary mandreraka ilay olana.